Forbes: Man United waa kooxda 5 ee dunida ugu qanisan - BBC News Somali
Forbes: Man United waa kooxda 5 ee dunida ugu qanisan
14 Luulyo 2016
Image caption Kaalinta koobaad ayay haysan jireen hadana kaalinta shanaad ayay ku jiraan inkasta oo aysan horyaalka Yurub ka qaybgalaynin
Manchester United ayaa kaalinta shanaad ka gashay liiska jariidadda Forbes ee kooxaha ciyaaraha ugu qanisan caalamka.
Kooxda kubadda koleyga ee Dallas Cowboys, ayaa liiska ugu sarreysa oo waxay haysataa dhaqaale gaaraya $4bn (£3.03bn), waxayna noqotay kooxdii ugu horraysay ee aanan aheyn koox kubad cag oo liiska jariidadda horkacda tan iyo markii ay Forbes bilowday qiimaynta 2011.
Man United, oo sanadihii 2011 iyo 2012 kaalinta koobaad ku jirtay ayaa haatan lagu qiimeeyay $3.32bn (£2.52bn).
Real Madrid ayaa haatan kaalinta labaad ku jirta oo haysata $3.65bn (£2.77bn) halka Barcelona ay kaalinta saddexaad ku jirto leedahayna $3.55bn (£2.69bn).
Manchester United – oo noqotay kooxda kaliya ee Ingiriis ah ee ku jirta 20-ka kooxood ee liiska ugu horreeya – ayaa gaartay sare u kac qiimeed oo gaaraya boqolkiiba 7 inkastoo aanay kooxdu ka qeyb qaadanayn tartanka Horyaalada Yurub ee Champions League, arrintan ayaa timid kaddib markii heeshiis ku kacaya £750 ay la gaartay shirkadda Adidas ee soo saarta qalabka ciyaaraha.
Sikastaba ha ahaatee, kooxdan ayaa lagu leeyahay deynta ugu badan ee 25-ka kooxood ee liiska ugu horreeya.
Kooxaha kale ee Ingiriiska ee soo galay liiska waxaa ka mid ah Arsenal waxa ay ku jirtaa kaalinta 23-aad, Manchester City kaalinta 28-aad, Chelsea kaalinta 36-aad halka Liverpool-na ay ku jirto kaalinta 41-aad.
10-ka kooxood ee ugu qanisan liiska Forbes
Dallas Cowboys $4bn (£3.03bn)
Real Madrid $3.65bn (£2.77bn)
Barcelona $3.55bn (£2.69bn)
New York Yankees $3.4bn (£2.58bn)
Manchester United $3.32bn (£2.52bn)
New England Patriots $3.2bn (£2.43bn)
New York Knicks $3bn (£2.27bn)
Washington Redskins $2.85bn (£2.16bn)
New York Giants $2.8bn (£2.12bn)
Los Angeles Lakers $2.7bn (£2.05bn)